မိုးမခထံ ဧရာဝတီတိုင်းက ပေးစာများ (ဇူလိုင် ၂၉ ၊ ၂၀၁၂ ) | MoeMaKa Burmese News & Media
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးက တရားစီရင်ရေး … နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူ သိစေရန်
မျက်မြင်တဦး (ကျုံပျော်) ဇူလိုင် ၂၉ ၊ ၂၀၁၂
6 Responses to မိုးမခထံ ဧရာဝတီတိုင်းက ပေးစာများ (ဇူလိုင် ၂၉ ၊ ၂၀၁၂ )
AS တစ်ဦး on July 29, 2012 at 2:47 pm
အခုလိုဆေးရုံအုပ်ကြီးအကြောင်းတင်ပေးတာကျေးဇူးပါ လူနာတွေတော်တော်ကိုဒုတ်ခေ၇ာက်နေတယ်သူကြောင့် တစိတ်
ရှိအာဏာပြနေတာနေပြည်တော်ကျန်မာေ၇းဝန်ကြီးတွေနဲ့ ဆရာတပည့် တွေဆိုပြီးလုပ်ချင်တိုင်လုပ်နေတာ မြို့ လည်းနာတယ် မရျိဆင်းရဲသားလူနာတွေလည်းဒုတ်ခရောက်တယ်
ကောင်းကောင်း on July 29, 2012 at 2:58 pm
ကျွန်မတို့ဆရာဝန် ဆရာမတွေ ၀န်ထမ်းတွေအကုန်လုံးသူ့ အာဏာပြတာနေ့ တိုင်းခံနေရတယ် သူကိုတော်တယ်ထင်လည်းကျန်းမာေ၇းဝန်ကြီးရှင့် နေပြည်တော်ခေါ်ထားပါလားတခုလောက်တော့ ပြောရအုန်းမယ်သူနေပြည်တော်ေ၇ာက်လည်းမျွေနေအုန်းမှာနော်သတိထားပါရှင့် 
ကိုနိုင် on August 1, 2012 at 9:48 am
တျွှန်တော်အထင်တောာ့အခုမှ ဟင်္သာတဆေရုံက ဦကြည်စီုးရောက်လာမှ သန့်ရှင်သပ်ရပ်ပြီးစည်ကမ်ရှိသွာတယ် လိုမြင်တယ်
pathein on July 30, 2012 at 12:26 pm
အင်တာနက်ဟာ အတော့်ကို အကျိုးကျေးဇူးရှိလှပါတယ်..ဒါပေမယ့် ပေးစာ၊တိုင်စာတွေဟာလည်း web အတော်များများမှာ ပလူပြန်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်၊ ဒီလိုပြောတော့ ကျွန်တော်က အတိုင်ခံရသူလား? မဟုတ်ဘူးနော်…အားလုံးကို Demo နည်းလမ်းအရဖြစ်စေချင်တာက ကိုယ့်သတင်းတကယ်မှန်ရင်…လိပ်စာအပြည့်အစုံ…ကိုထည့်ပေးထားသင့်တယ်..သစ်ထူးလွင်မှာဆို တင်တဲ့သူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တောင်ပါတာကိုတွေ့ရတယ်…ဒါမှလည်း ခံရတဲ့သူတွေ့နဲ့ လုပ်တဲ့သူတွေနဲ့ တရားမျှမျှတတပြန်လည်ဖြေရှင်း ခွင့်ရမယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ ထင်ပါတယ်….
ကိုနှင်းမောင် ဟင်္သာတ on July 31, 2012 at 7:08 pm
ကိုပုသိပ်ရယ် ကျွန်တော်တို့ ဟင်္သာတသားဗျ သတိရှိတယ် ဃင်ဗျားတို့ တိုင်ကကိစတွေတောင်တင်နေတာဘဲဒီသ
တင်းမှန်လားမမှန်လားဆိုတာခင်ဗျားအပူမပါဘူးကာကယံရှင်တွေသိတယ် ဟင်္သာတသားတွေကကိုမြို့ ကိုကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ သူတွေအကြောင်းဘယ်နှစ်ခါများပါသလဲမစားနဲ့ လို့ မပြောဘူးစားပါဝန်ထမ်းဘဲနားလည်တယ်ဗျ စားတော့ စားပြီးမြို့ ကောင်းစားေ၇းအလုပ်မလုပ်ရင်တော့ ဒီတိုင်ကြည့် နေမယ်မထင်နဲ့ ခင်ဗျားမယုံရင်စောင့် ကြည့် ဒီအတိုင်ဆက်သွားကြည်တီဗွီဖန်သားပြင်ကမြင်ရမယ်
ကိုနှင်းမောင် ဟင်္သာတ on August 1, 2012 at 8:08 pm
ကိုနိုင်ပြောတာမှန်ပါတယ်အစကတော့ ဟုတ်တယ်ဗျ ခင်ဗျားမယုံရင်gtc ကျောင်ကလူတွေမေးကြည့် 
ကျောင်ဆရာတစ်ဦးကင်ဆာနဲ့ မသွားနိုင်ဘူးသေတော့ မယ် ဆေးပင်စင်တင်သာလုကိုမြင်မှပေးမယ်တဲ့ ထမ်းစဉ်နဲ့ တင်လာရတယ်ဒီကျတော့ ဆရာဝန်3ဥိးစစ်တယ်ဝန်ထမ်းအချင်းချင်းနားလည်ပေးရမှပေါ့ ဆေးရုံစားသောက်ဆိုင်တွေနဂိုက3000 အု30000တစ်ခန်းနော်တိုင်မျပြန်လျောပေးတယ်ည11နာရိကျော်လို့ ဆေးရုံတက်ကြည့် ဆေးရုံတံခါးသောကသူဆီမှာ
ညိုထက်ညို – နံနက် ငါးနာရီ https://t.co/ObRxphJ1EN https://t.co/VrkyZ0uBjC about 24 minutes ago ReplyRetweetFavorite